Tolon’ny mpiasam-panjakana : lafo vidy ho an’ny FATE ny fanaovana be marenina (+vidéo)
Tsy te-handre ny fotakian’ny mpiasam-panjakana ny FATE araka ny fijerin’ny « cellule de crise interministérielle ». Ny telo herinandro nitambaran’ny sendika maro dia nihitana fa tsy misy antenaina intsony amin’izao fitondrana izao raha ny momba ny fanatsarana ny asam-panjakana no resahina. Ny hany asetriny ny fitakiana sendikaly dia ny famoretana sy fampihorohoroana isan-karazany izay efa tena mankadilo ny sofin’ny mpitolona mihitsy ankehitriny. Soa ihany fa mandray andraikitra manoloana ny tolona iombonana ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara ka mitsara ara-drariny izay raharaha mandalo eo aminy.
Isan’ny mandray anjara manontolo ao anatin’ny tolon’ny mpisam-bahoaka mantsy ny mpitsara ka afaka manome toky fa tsy hanohitohina izay rehetra ampihorohoroana noho ny tolona iarahana. Porofon’izany : afaka madiodio noho ny tsy fahampian’ny porofo i Valérien Rakotonandrasana, filohan’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy eto Madagasikara.
Miantso ny fandraisana andraikitry ny Raiamandreny am-panahy sy ara-drazana ny mpiasam-panjakana mba tsy hijery fotsiny ny fahorian’ny vahoaka. Isan’ny fahefana mahenika ny Nosy ary mbola maro mpankato ireo Raiamandreny roa tonta ireo ka afaka misoroka izay mety ho ratra aterak’izao krizy mamaivay izao. Rahatoa kosa ka tsy mandray andraikitra mandrapahavin’ny alarobia 18 jolay izy ireo dia tsy maintsy hampiakatra ny hafangainam-pandehany ny « fonctionnaires » mba tsy hampitarazoka loatra ny fandraisana fanapahan-kevitra ka hanome vahana ny fifankahalana sy ny fifandrafesana ezahin’ny mpanjanaka sy ny FATE aorina eto amintsika.
Tondro zotra : manamafy ny fisitahany ny parlemantera Ankolafy RAVALOMANANA (+vidéos)
Fanamafisana ny fanamarihana rehetra mampikatso ny fanatanterahana ny tondro zotra no votoatin’ny fanamabaran’ny parlemantera avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA androany. Teboka maro no notsindrian’izy ireo saingy ny iraisana dia ny tsy fahampian’ny finiavan’ny mpanongam-panjakana hamaha ny krizy sy hananagana tetezamita tena iaraha-mitantana. Isan’ny manaporofo ny fanaovana hena an-tanan-tsaka ny fanjakana ohatra ny fisian’ny olom-boatendry sasany nomena toerana amin’ny anaran’i tgv ary efa nomelohin’ny Ankolafy im-betsaka izany.
Misitaka nefa miasa …
« Io fisitahana io no asanay amin’izao fotoana » hoy Raveloson Constant. Nitondra valin-kafatra ho an’ny resaka aparitaka any anaty andrim-pitondrana ny tenany. Malaza manko ankehitriny fa ho tapahina avokoa ny tambin-karaman’ny parlemantera avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA ary ho esorina ireo ministra dimy. Nambaran’ity mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita ity moa fa « izay sahy manao izany dia hiharihary fa tsy mankato ny tondro zotra ».
PARLEMENTAIRES__VM.pdf 1.15 Mo
PARLEMANTAIRES_VF.pdf 1.16 Mo
Asam-panjakana : eny amin’ny BC i Valérien rahampitso (+vidéo)
Telo andro mialohan’ny hivoahan’ny didim-pitsarana mikasika an’i Valérien Rakotonandrasana dia antsoina eny amin’ny « Brigade Criminelle » etsy Anosy ny tenany rahampitso amin’ny 09 ora maraina. Tsy mazava ny anton’ny fampiantsoana saingy ahiana ho mizotra mankany amin’ny famoretana hampitsaharana ny hetsikin’ny sendikan’ny paramed rehefa tsy azo tamin’ny fanambazaa toerana ity filohany ity.
Toa midika ihany koa tsy fahatokisan’ny mpitondra ny fitsarana intsony kopa izao fihetsika izao satria ny SMM dia efa miara-dia tanteraka amin’ny mpiasam-panjakana rehetra ka mety tsy manaiky handray baiko avy amin’ny politisiana intsony. Na izany na tsy izany dia mety ho tanana mandritra ny faran’ny herinandro indray izany ny filohan’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy mba hahafahan’ny FATE, na manohy ny fanambatambazana na manery azy avy hatrany hampitsahatra ny tolona sy handetika ireo namany mpiara-mikatroka rehetra. Soa ihany fa tanora manindraindra ny maha-izy azy sy ny fahamarinana ny tovolahy ka mety mbola ezaka lalina vao mety hampihontsona azy.
Mikasika ny « réquisition » izay natao tamin’ireo mpitsabo sy paramed kosa dia efa namoaka fanambarana ho fanoherana ny mizana tsindrian’ila eo amin’ny fitondrana ny asam-panjakana ny « cellule de crise interministérielle ». Misy manko ny karazana mpisam-panjakana izay tsy mahazo itony taratasy fanerena hiasa itony mihitsy raha vao mitokotokona kely fa avy hatrany dia mivaly ny fitakiany satria any aminy ny basy ka atahoran’ny mpitondra izy ireo.
FANAMBARANA IOMBONANA.doc 176.5 Ko
Fitokonam-be : tsara fanombohana hatrany amin’ny faritra (+vidéos)
Amin’ny 16 jolay indray vao hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny sekretera jeneralin’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy. Io no valin’ny fotoam-pitsarana tao Anosy androany. Araka ny fanazavan’i Rakotonandrasana Valérien dia tsy misy ny vesatra afaka itazomana azy koa dia nandray io fanapahan-kevitra io ny mpitsara. Nambarany kosa anefa fa na dia namela ny heloky ny « profesora Baomba » tamin’ny daroka nataon’ity farany aza izy dia tsy hampangina ny tolona sendikaly efa niaretany ny mahamay satria ny fanatsarana any tontolon’ny asam-panjakana ho an’ny taranaka faramandimby no ilofosan’ny mpiara-mitolona rehetra.
Sary Anosy androany
Ho an’ny mpisolovava Me. Willy Razafinjatovo kosa dia « matoa ny fampanoavana mametraka ny raharaha eo amin’ny fahendren’ny fitsarana dia tsy mana-katokona hitanana ny voapanga izy ireo ». Ny fitsarana rahateo efa mivonona handray anjara amin’ny fanovana fitondran-tena koa manam-pinoana amin’ny fahafahana madiodio ny mpisolovava. Namafisin'ny Me. Willy kosa fa "tsy voatery ankinina vola foana ny fiainana ary tokony mianatra mifanampy ny Malagasy hialana amin'ny fitiavan-tena".
Niharan’ny herisetra …
Omaly hariva tokony tamin’ny 05 ora sy sasany dia nisy andian’olona nanafika ny tranon’ny mpiandraikitra ny serasera eo anivon’ny sendikan’ny paramed. Ity farany mantsy no nahazo ny sarin’ireo mpanakorontana niditra tao amin’y HJRA nadrava ny hetsiky ny sendika roa tonta ny maraina. Rehefa tafiditra tao an-trano ireto « jiolahy » ireto dia dia nilaza mazava tamin’ny vadin’ilay mpitsabo mpanampy fa « miakina aman’aina ity raharaha ity fa aiza ny vadinao ». Nakorotan’izy ireo manontolo ny trano saingy nandray andraikitra avy hatrany ny fokonolona ka niala faingana teny Andrefan’Ambohijanahary ireto mpiakarama an’ady ireto. Nanambara kosa anefa izy ireo fa tsy mahazo madalo eny Anosibe Angarangarana sy Isotry ilay olona karohiny « fa raha tsy izany dia maty avy hatrany ». Manoloana izany ary dia mandray fepetra mikasika ny fandrindrana ny hetsika izy ireo.
Raha vahaolana no nantenain’ny mpitsabo sy ny paramed hivoaka tamin’ny filankevitry ny governemanta dia fangejana no naterany. Nivoaka androany ny didy hitsivolana manery ireto mpiasan’ny fahasalamana ireto hamonjy ny toeram-piasany ao anatin’ny 24 ora manomboka androany. Mandrara ihany koa ny fidiran’ny mpanao fitokonana any anaty hopitaly toa ny ao amin’ny HJRA. Tsy hampihemotra an’ireo mpikatroka anefa izany fa vao maika hanamafisany ny tetikady ho entiny mampiseho ny fitakiany. Nambaran’ny sekretera jeneralin’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy moa fa « henatra ho an’i Madagasikara ny nijoroana profesora manam-pahaizana ambony niandry vavahady » nanakanana ny fidiran’izy ireo tao amin’ny HJRA androany. Nametraka fitoriana eny amin'ny "conseil d'Etat" avy hatrany moa ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanamapy mba hampitsahatra ny fampiharana ity fanapahan-kevitry ny fanjakana ity.
Tsy mijanona eto Antananarivo
Araka ny tomban’ezaka nataon’ny mpandrindra eo amin’ny « cellule de crise interministérielle » dia mahomby ny fanombohan’ny fitikonam-be. Tsy nijanona teto an-drenivohitra manko izany fa mahazo laka hatrany amin’ny Faritra hafa. Ny tany DIANA ohatra dia nanao fivoriam-be koa androany ary efa mandrindra ny fomba hanatanterahana ny hetsika manomboka izao. Ny teo amin’ny « rue de la liberté » kosa dia nahitana ny solotenan’ny ministera maro izay efa nifanome toky fa hanenjana ny tolona.
Manda ho an’ny firaisan-kinam-pirenena : « Rajoelina no olana » (+vidéo)
Tsy fandriam-pahalemana, fitkonan’ny mpiasam-panjakana, amboletram-pifidianana : ireo rehetra ireo dia manaporofo fa tsy mahafehy fitondrana izany i tgv. Zary henatra ho an’ny tandroka aron’ny vozona ny zava-mitranga any amin’ny Faritra Anosy sy Androy amin’ity raharaha Remenabila ity. Efa ho iray volana izao no lasa fa tsy misy ny vokatra azo tsapain-tanana amin’ny fandaniam-bola natao amin’ny fandefasana rezimanta any an-toerana. Ny fitokonan’ny mpiasam-panjakana izay efa mananika ny faobe amin’izao fotoana dia mitady hiteraka fifandrafiana eo amin’ny samy Malagasy.
Fantatra mantsy fa ara-drariny ny fitakian’ny mpiasam-bahoaka nefa mitombona koa ny hetahetan’ny mpanjifa amin’ny fikatsoan’ny tolotra omena azy ireo. Manoloana ireo rehetra ireo anefa dia mikasa ny hanao fifidianana ny ao amin’ny fitondrana na dia tsy misy aza ny paikady mazava hanarenana ny tsy mety tamin’ny fifidianana rehetra natao teto Madagasikara. Indrindra fa ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ny 2010 izay « fifidianana ratsy indrindra » hatramin’ny nazahoana ny fahaleovan-tena.
Ho an’ny Manda hoan’ny firaisan-kinam-pirenena ary dia ny fanambarana ny hery no afaka hamongorana ny olan’ny Firenena. Raha ny fahitana ireo zavatra rehetra mitranga ireo mantsy dia ny ao Ambohitsorohitra sy ny namany mihitsy no tsy manana finiavana hamaha ny olana. Miezaka mafy ny mbola hampizarazara ny fiaraha-monina Malagasy i tgv satria tsy vitany ny mitondra araka ny tokony ho izy. Manilika andraikitra lava sisa eritreretiny fa hamahana ny olana na dia tetezamita fanorenana aza no bodoiny hoentina. Mba hisorohana ny mety fifandrafesan’ny samy Malagasy ary dia i tgv mihitsy no tokony hailika tsy ho eo amin’ny fitondrana intsony araka ny fahitan’ny Manda ho an’ny Firaisan-kinam-pirenena ny toe-draharaha politika amin’izao fotoana.
Asam-panjakana : raikitra ny fitokonam-be (+vidéos)
Mifanome fotoana eo amin’ny « lalan’ny fahafahana » Anosy ny mpiasam-panjakana rehetra manomboka rahampitso 11 jolay. Araka ny teny nifanomezana herinandro maromaro izao dia mizotra mankany amin’ny fitokonam-be ny hetsika izay arindran’ny « cellule de crise interministérielle » ary io hanomboka rahampitso amin’ny 10 ora maraina io dia iombonan’ny sendika maro isan-tokony izay mahatsapa fa tsy tafavoaka intsony ny Firenena raha tsy mandray andraikitra izy ireo. Ny tolakandro kosa dia hanotrona ny sekretera jeneralin’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy izy ireo. Ity farany izay hiakatra fitsarana taorian’ny fisamboran’ny « profesora Baomba » azy.
Sary Carlton androany
Manao antso avo ho an’ny vahoaka Malagasy rehetra sy ny mpanao politika ihany koa ny mpandrindra mba hifanome tanana amin’ny fiaraha-mizaka izao tolona izao. Raha ny fanazavan’izy ireo mantsy dia tsy ny tombontsoan’ny sendika tsirairay intsony no fanoitra mitondra ny mpiasam-panjakana fa ny hanangana fiaraha-monina vaovao tsara lavitra noho ny nateraky ny fanonganam-panjakana sy ny fampananatenana poakaty. Ireto mpitondra tsy ara-dalàna ireto anefa dia tsy mahalala mifampitsinjo ary mitsipaka ny fifampireshana fa nisafidy ny hanao be marenina. « Tsy tsapan’izy ireo » hoy i Doudou « fa ny mpiasam-panjakana no mbola mitazona azy eo amin’ny toerany satria izy tsy ara-dalàna ».
Tsy hanaiky hatao fitaovana intsony ireto mpiasam-bahoaka ireto manomboka izao fa mikasa ny handray anjara feno amin’ny fandrafetana fiaraha-monina Malagasy mba tsy hiverenan’ny romoromo intsony. Amin’izao tetezamita indrindra izao no itakian’izy ireo ny fampitovian-danja ny mpiasam-panjakana araka ny fianarana sy ny fiofanana vitany satria miteraka fisaraham-bazana ny fanaovana mizana mitanila na fanomezana tombontsoa andian’olona manokana na dia mitovy aza ny diploma eo am-pelatanana.
Ho an’ny Firenena
Arak’izany dia tsy ny hiaro ny tombontsoan’ny mpiasa ihany no asan’ny sendika fa ny hametraka ady hevitra ara-tsosialy ho tombontsoan’ny Firenena sy ny mpiray tanindrazana. Raha ny any amin’ny tany mandroso rehetra dia manana andraikitra amin’izany ny sendika ka na hatramin’ny fanovana lalàna aza dia akana ny hevitr’izy ireo. « Ny soa fianatra » hoy ny fiteny Malagasy koa vonona haka ohatra tsara amin’izany fomba fanao hita fa mahomby izany ireto sendika izay miaramamindra ireto.
Isan’ny tolona naharitra indrindra ny an’ny mpanabe raha ny fitakian’ny samy sendika no resahina. Olana goavana ho an’ny any amin’ny Faritra anefa ny tsy fisian’ny vaovao marina tonga any amin’izy ireo. Feno lainga sy fampihorohoroana lalandava ny ampitain’ny hainoamanjerim-panjakana izay hany hita sy heno any amin’ny Faritra. Nangataka ny hitadiavana ny fomba hifampizarana vaovao marina arak’izany ny mpikatroka SEMPAMA avy any amin’ny faritra mba hampirindra ny hetsika ataon’ny mpiasam-panjakana manerana ny Nosy.
Tsy hijanona intsony
Ho an’ny mpiasan’ny Banky Foibe manokana dia tsy misy resaka tombontsoa velively ny tolon’izy ireo fa ny fikatsahana ny fanajana ny lalàna ao anatin’ny fampiasana ny volam-panjakana. Adidin’izy ireo mantsy ny miaro ny sandan’ny vola Malagasy noho izany dia sarotiny amin’ny fomba fiasa sy ny pitsopitson’ny antanan-toham-pitantanana ao amin’ny BCM izy ireo. Na hivaly daholo tokoa aza manko ny fitakian’ny sendika rehetra dia tsy hisy lanjany izany raha toa ka latsaka ambany ny sandan’ny Ariary.